WAA MAXAY NOOCYADA KALA DUWAN EE PEONIES, WAXAYNU BARAYNAA KALA SOOCIDDA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Wadaagga noocyada of pions, waxaan wada fahamnaa
Peony waa ubax uducsan oo indhaha noo furan May illaa dhammaadka Juun. Waddanku wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ameerika iyo Eurasia. Cudurka Peony wuxuu ka kooban yahay 34 nooc, kuwaas oo loo qaybiyay 5,000 oo nooc. Isla mar ahaantaana, 4,500 waa nooca dabiiciga ah ee peonies iyo kaliya 500 nooc ayaa ah geed sida.
Ma taqaanaa? Peony waa ubax dheer oo nool, waxay ku kori kartaa hal meel toban sano. Geedkeeda waxay gaartaa dhererka 1-2m, laftigana lafteedu waxay noqon kartaa ilaa 25 cm dhexroorka. Ubaxa waa mid aan qabin in uu daryeelo, wuxuu leeyahay xidid weyn oo caleenta caleenta ah. Leaves wuxuu noqon karaa mid cagaaran ilaa guduud.
Sidaa darteed, maxay yihiin noocyada foosha ee jira? Noocyada kala duwan ee peonies ayaa duuban. Asalka iyo qaabka, boorashyada ayaa lagu sifeeyay sida soo socota:
Tree, waxay u kala qaybsan yihiin:
Noocyo, oo loo qaybiyey:
Peony Belotsvetkovy (caano-ubax);
Xiddiga Marin (lafdhabarta);
Aan u falanqeyno si faahfaahsan noocyada dhirta geedka.
The stem waa dherer, gooyay budo, caleemo waaweyn cufan. Muraayaduhu waxay ka iman karaan casaan ciriiri ah ilaa dhar guduudan.
Tilmaamaha geedkaan waa in aan la qabin heerkulka.
Noocyada tufaaxa jiiska ee Jabbaanku waa qaab-qaabeeya, marmarka qaarkoodna gudaha ayey ku jirtaa. Midabka stamens waa jaalle, casaan, casaan. Petals waxaa loo diyaariyaa hal ama dhowr saf.
Bacriminta Peony waa natiijada isdhexgalka ee cawska iyo geedaha. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah dhirta this waa midabka dhalaalaya ubax, koritaanka xoog leh, ubax badan, caabbi barafoobaan.
Noocyo geedo ah ee peonies - dhirta undemanding. Si ay ubax this si ay u farxaan indhahaaga inta ugu macquulsan, waa inaad ku beeri in qaybta ah ee muddo ubax kala duwan ee noocyada kasta. Kooxdan waxaa ka mid ah 5 nooc oo waaweyn.
Peony Belotsvetkovy (caano-ubax)
Warshadu waxay leedahay fara badan oo kala duwan oo ku yaal bartamaha. Caleemaha ubaxa waxay la socdaan qaab fiiqan, qaab yar oo qumman. Petos wuxuu ku koraa 1-2 saf. Ubaxa noocyada kala duwan ee peonies waa weyn, ilaa 18 sentimitir dhexroor. Qalabka ubaxu wuxuu gaaraa 90 cm Cunto kala duwan oo midabkeedu yahay mid aan simanayn. Muddada ubax - dhammaadkii Juun - bilowgii July.
Marin Root (Evading Peony)
Muddada ubax ee noocan oo kale ah peony - dhammaadka May - bilowga Juun. Mindhicirka waa dhumuc, dhererka dhererka wuxuu gaari karaa 40 cm ilaa 1 mitir. Dhuxulku wuxuu kudhowaad yahay 13 cm dhexroor, wuxuu leeyahay midab khafiif ah. Bannaanka u badan u koraan kala duwan tufaax kala duwan sida geedka daawo.
Magaca warshadu waxay u hadlaysaa nafteeda, waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Si kastaba ha ahaatee, waqti ka dib, bannaanka u bilaabay inay beeri u sababtoo ah guryaha suuxinta.
Warshadu waxay leedahay mug weyn oo casaan ah oo casaan ah ilaa 12 cm dhexroor. Heerkulka dhirku wuxuu u dhexeeyaa 40 illaa 90 cm, ubaxa waa mid aan qadhaad lahayn. Wakhtiga ubaxu waa qeybtii hore ee Juun.
Sariirta dhuujinta leh
Masjidka cidhiidhiga ah ee dhoobada leh ayaa leh midab casaan leh ama midab casaan ah. Dhexdhexaadiyaha ah ee biqilka waa yar yar, kaliya ilaa 8 cm. Warshadu waxay si fiican u qurxin doontaa dhererka furan ee dhammaadka May, laakiin markaa way lumi doontaa jilitaankeeda.
Peony Mlokosevich waxay magaceeda ku heshay sharaf. Warshadu waxay leedahay midab huruud ah oo dhalaalaya, qummanaan yar oo casaan leh.
Qiyaasta buro waa ilaa 12 cm. Ubax Tani ubaxu si tartiib ah, ubax ah - May.
Qeybinta of pions qaab qaab bur leh
Sida aad u arki karto, waxaa jira noocyo badan oo peonies ah ee dabeecadda, laakiin tani ma aha oo dhan. Peonies waxaa kale oo lagu sifeeyay qaabka dhoobo. Waa kuwan noocyada peonies ee ku jira nooc ka mid ah buro:
Kooxda piony terry waxaa loo qaybiyaa koox hoosaad:
Dhirta cawska ee kooxda ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin peonies ugu jecel beeraleyda.
Kuwani waa ubaxyo waaweyn oo leh tufaax ballaaran oo saddex saf ah. Goobaha sare iyo kuwa hoose waxay leeyihiin midab isku mid ah, midabkuna wuxuu ka duwan yahay midabka wuxuuna ka kooban yahay midabyo dhuuban. Pistils iyo stamens ayaa si caadi ah loo horumariyaa, waxaa jira qaar badan oo ka mid ah, mararka qaarkood waxay ku qarsoon yihiin tiknoolajiyada.
Nitaa noocyo kala duwan oo ka mid ah: "A la Maud" (noocyo hore), "Nancy" (noocyo hore), "Aritina Nozen Gloria" (noocyo kala duwan), "Raspberry Sande", "Pink Cameo", "Alexander Dumas" (noocyada hore ee dhexdhexaadka ah), Charm Red, Henry Bokstos (noocyo hore), Solange (muuqaalka dambe), Goody, Beev (noocyo hore).
Dhumucyada noocyada noocaan ah waxay leeyihiin muuqaal muuqaal leh, maadaama ay leeyihiin ubaxyo fudud iyo jilicsan. Petals waxay ku taallaa shan ilaa todoba saf. Gaarashadoodu waxay kobcin karaan labadaba bartamaha maadada iyo kuwa tufaaxa.
Noocaankan waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee pions sida "Miss America" ​​(noocyo hore dhexdhexaad ah), "Citic" (noocyo hore dhexdhexaad ah), "Lastres" (noocyo hore), "En Berry Cases" (noocyo hore).
Peony, fudud, mid aan labanlaab ahayn, - nasiib wanaag. Petals ma aha mid aad u ballaaran, diyaarin hal ama laba saf. Kaliya hal budo ilaa toban tufaax.
Ubaxa Volumetric ee dhexroorka, xaruntiisuna waxay si buuxda ula qabsadeen stamens. Petals waxay ku taallaa hal ama laba saf. Tufaaxa hoosta ayaa ah mid ballaadhan, oo wareegsan, iyo bartamaha, lid ku ah, cidhiidhiga iyo gaaban.
Peonies-like peonies waxaa ka mid ah: "Mountain Snow" (noocyo hore), "Ruth Clay" (noocyo hore dhexdhexaad ah), "Rhapsody" (noocyo kala duwan oo hore).
Peonies Japanese waxay leeyihiin stamens, oo la mid ah tufaax, sidaas dhexe waa mid aad u qalafsan. Istaatiishadu waxay noqon karaan midab la mid ah tufaaxa. Ubaxa wuxuu leeyahay guntin cadaab ah. Petals waxay ku taallaa hal ama laba saf.
Kala duwanaanshaha jarmalka waxaa ka mid ah: "Jooniska" (noocyo kala duwan oo dambe), "Velma Atkinson" (noocyo hore), "Karara", "Hotcolet".
Sidee loo kala qaybiyaa peonies iyada oo ku xidhan wakhtiga ubaxa
Si aad u hesho warshad midab leh oo udambeeya si aad ugu raaxeyso indhahaaga inta ugu macquulsan, waa in lagu beeray beerta muddada ubax. Inta badan, peonies midba midba Bloom. Waxaa jira wadarta 7 kooxood oo ubax ah:
Xilli hore - May ilaa Juun 5;
Hore - laga bilaabo Juun 5 ilaa 10;
Dhexe dhexe-bilow - laga bilaabo 10 ilaa 15 Juun;
Dhexdhexaad - laga bilaabo Juun 15 ilaa Juun 20;
Dhamaadka Dhalashada - laga bilaabo 20 ilaa 25 Juun;
Late - laga bilaabo 25 ilaa 30 Juun;
Aad ayaan u daahay - kadib 30-kii Juun.
Peony - ubax aan caadi ahayn oo qurxin doona beertaada xitaa ka dib markaa blooms. Caleenta caleenta ah wuxuu ku siin doonaa waxyaabo badan oo cagaaran. Iyo la siiyo daryeel aan qabyo ahayn, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu u heli doonaa naftiisa oo u kala duwan.